6 Cashar oo Muhiim ah oo Laga Bartay Dhismaha Kooxda SEO ee Guriga dhexdiisa | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/6 Cashar oo Muhiim ah oo Laga Bartay Dhismaha Kooxda SEO ee Guriga Gudihiisa
6 Cashar oo Muhiim ah oo Laga Bartay Dhismaha Kooxda SEO ee Guriga Gudihiisa
Lixdii sano ee ugu horeysay ee xirfadeyda SEO waxaa lagu qaatay isla kooxda SEO-ga ee guriga. Muddadaas, kooxdu waxa ay galeen isbeddello badan, kobcin iyo la qabsi iyaga oo raadinaya habka ugu waxtarka badan ee hawlgalka.
Markii hore, waxaanu ahayn koox yar, koox yar oo si weyn ugu shaqeysanayay silo.
Laakiin marka la gaadho 2020, waxaanu ahayn koox ka kooban todoba, oo ay ku jiraan doorar sare iyo kuwo takhasus leh. Waxa si buuxda nalooga dhex daray waaxda dhijitaalka ah iyada oo loo marayo habab iyo siyaalo shaqo.
Laga soo bilaabo maalmahaygii ugu horreeyay ee SEO ilaa wakhtigayga qayb ka mid ah kooxda hoggaanka, waxaan ka mid ahaa dhammaan kor u kaca iyo hoos u dhaca oo aan wax badan ka bartay waxa loo baahan yahay si loo caddeeyo qiimaha maalgashiga SEO - iyo samaynta maalgashigaas .
Waa kuwan casharradii ugu muhiimsanaa ee aan bartay.
1. Waxba ma dhacaan la'aantiis
Haddii aad hal shay ka soo qaadato maqaalkan, iska hubi inay tani tahay: Dhib ma laha sida aad u wanaagsan tahay, ama sida quusta ah ee aad ugu baahan tahay gacmo badan oo sagxad ah.
Ma heli doontid fursad aad ku kobciso kooxdaada ama aad kordhiso miisaaniyadaada adigoon wax ka iibsan dadka ku siin kara waxyaalahaas.
Tan, waxaad u baahan tahay kalsooni.
Tani waxay ku imanaysaa waqti ka dib, iyada oo laga helayo aqoonta mawduuca wanaagsan, aragtiyaha, xukunka, iyo awoodda lagu muujinayo tayadan si joogto ah.
Laakiin waxaa jira waxyaabo aad samayn karto si aad naftaada u geliso meel adag si aad u dardargeliso dhisidda sumcadan.
2. qaabdhismeedku waa saaxiibkaa
Marka hore, waxaad u baahan tahay qaab dhismeed saddex meelood oo muhiim ah:
Xog lagu kalsoonaan karo iyo hab joogto ah oo loo wajaho.
Istaraatiijiyad dhammaystiran, mudnaanta la siiyey iyadoo lagu salaynayo hantidhawrka goobta oo dhamaystiran, oo qeexaya waxaad ka shaqayn doonto, iyo, si dhab ah, waxa aanad wali wax ka qaban karin (sabato ah ku tiirsanaanta, miisaaniyada, ama khayraadka).
Cadence joogto ah gudbinta horumarkaaga.
Gunnada abuurista qaab-dhismeedkan ku xeeran barnaamijkaaga SEO waa inay awood u leedahay inay kaa ilaaliso isbeddellada lama filaanka ah ee ururkaaga.
Tusaale ahaan, haddii ay jiraan isbeddelo ku yimaadda hoggaanka waaxdaada oo ay la socdaan maareeyayaal cusub oo raadinaya inay caddeeyaan habkooda, cag adag iyo qorshe cad ayaa inta badan macnaheedu yahay fikrad adag ayaa loo baahan yahay kacdoon kasta.
Waxayna xitaa u abuuri kartaa kooxdaada fursad ay ku koraan saameyntooda oo ay u dardargeliyaan horumarkooda.
3. Waa inaad 'Dhaqaajisaa irbadda'
Waxa xiga ee aad u baahan tahay waa rikoodhka raadraaca.
Tani waxay dareemi kartaa inaan la gaari karin haddii aad ka buuxdo shaqaale yari.
Isku day inaad horumar ka samayso dhammaan dhinacyada, faafinta naftaada oo aad u caato ah, iyo ugu dambeyntii inaad ku guuldareysato inaad saameyn dhab ah ku sameyso meel kasta ma caddaynayso inaad u baahan tahay kheyraad dheeraad ah qof kale laakiin naftaada.
Taa beddelkeeda, la xiriir maamulayaashaada mashaariicda aad mudnaanta siin doonto, oo si cad ugu yeer meelaha aadan ka shaqeyn doonin xaddidnaanta awoodda awgeed.
Iyada oo baaxadda diiradda la saarayo, waxaad markaas muujin kartaa saameynta aad ku sameyn karto culeys shaqo oo habboon oo u oggolow inay ogaadaan soo noqoshada ay ka heli karaan maalgashiga kooxda SEO.
Talaabadani waxay ogolaanaysaa in mashaariic badan laga wada shaqeeyo isku mar.
4. Dhis Kiis Ganacsi Oo Qasban
Waa inaad sidoo kale ka faa'iidaysan kartaa aasaaskan, adoo waydiinaya waxaad u baahan tahay oo aad dadka ka dhaadhicinayso inay ku siiyaan.
SEO waa, dabeecad ahaan, waa fidsan oo waligeed koraya. Way adkaan kartaa in la ogaado haddii aad si dhab ah kheyraad ugu yar tahay, ama aad ka awood badan tahay fursadaha aan dhammaadka lahayn iyo dunta lagu jiido.
Markaad qiyaasto soo noqoshada suurtagalka ah ee maalgashiga mashaariicda ee kordhinta awoodda furmi doonta, waxaad awoodi doontaa inaad xaqiijiso inaad si dhab ah ugu baahan tahay dad badan oo aad samayso kiis adag oo lagu ballaarinayo kooxdaada.
Dabcan, sida dhinacyo badan oo SEO ah, ROI waxay noqon kartaa mid adag oo adag in la xisaabiyo. Natiijooyinka looma dammaanad qaadi karo si la mid ah kanaalada kale ee suuqgeynta dhijitaalka ah.
Intaa waxaa dheer, qaar badan oo ka mid ah hindisayaasha aan u baahanahay inaan ka shaqeyno maahan inay ku saabsan yihiin korriinka korodhka, laakiin halkii la raaci lahaa hababka ugu wanaagsan iyo ilaalinta waxqabadka muddada dheer.
Laba xeeladood oo waaweyn ayaa naga caawiyay inaan tirooyin ku dhejino mashaariicda aan ognahay inay muhiim yihiin, iyo inaan cadeyno baahida loo qabo kordhinta awoodda.
Soo Bandhigida ROI La Saadaaliyay Sida Range
Xaaladda ugu fiican, waa maxay saamaynta ay hawshani yeelan karto?
Maxaa dhacaya haddii ay leedahay natiijo dhexdhexaad ah oo ka badan intii la filayay?
Xaqiiqadu waxay u badan tahay inay u dhexeyso meel u dhaxaysa, laakiin la xiriirida natiijooyin kala duwan waxay kuu ogolaaneysaa inaad noqoto mid hufan oo run ah adigoon ballanqaadin ama hoos u dhigin natiijooyinka suurtagalka ah.
Tusaale ahaan, hal hab ayaa noqon doona:
Qeex liiska ereyada muhiimka ah mashruucaagu wuu saamayn doonaa.
Xilli kasta, qorshee gujisyada suurtagalka ah iyadoo lagu dhufto mugga raadinta bilaha ah iyo qiyaasta guji-ku-dhufashada ee boosas kala duwan (tusaale, saddex boos oo sarreeya, shan boos oo sarreeya).
Ka jar taraafikada hadda jirta oo ay kaxeeyeen ereyadan wadarta guud ee la saadaaliyay si loo xisaabiyo qiyaasta sare iyo hoose ee kor u qaadista taraafigga.
Ikhtiyaar ahaan, dabaq heerarka beddelka iyo celceliska tirooyinka kharashka si loo xisaabiyo kor u qaadista dakhliga.
Xisaabi Qiimaha Wax La Qabanayo Ama Ka Soo Horjeedka ROI
Haddii ujeeddada mashruucu ay tahay in laga ilaaliyo waxqabadka SEO-ga cusub ee algorithm-ka mustaqbalka ama in laga sii hor mariyo tartamayaashaada, isticmaal hab la mid ah kor lagu sheegay, laakiin ku salaysan luminta booska.
Awood u yeelashada in la qiyaaso faa'iidada kordhinta awoodaada kaliya maaha in ay caawiso gudbinta qiimaha shaqada ay kooxdaadu qabato (oo ay qaban karto) laakiin sidoo kale waxay kaa caawinaysaa inaad dhisto awoodaada iyo kalsoonidaada.
Dhacdo ahaan, sidoo kale aad bay u qiimo badan tahay marka aad u kala mudnaaninayso tusaale kooxda horumarinta ururkaaga!
Shaqaalayso Dadka Saxda ah
Markaa waxaad heshay oggolaansho si aad u kordhiso tiradaada madaxa. Hadda waa maxay?
Iyada oo ku xidhan mushaharka aad bixin karto, waxaad u baahan doontaa inaad xaqiiqo ka ahaato heerka khibradda aad ka filan karto codsadayaasha.
Iyada oo tan, kiiskaaga ganacsiga, iyo xeeladda maskaxda ku hayso, billow inaad isku dhejiso sharraxaad shaqo oo leh noocyada mas'uuliyadaha doorku ku lug yeelan doono.
Markaad shaqaaleysiiso jagooyin yaryar oo badan, tixgeli haddii khibradda SEO ee gaarka ah ay runtii muhiim tahay.
Waa suurtagal in lagu barto SEO-ga shaqada, laakiin tayada qofka u dhigay si uu u horumariyo xirfadle SEO ah - xiiso, jacayl waxbarasho iyo xalinta dhibaatada, adkeysiga, diblomaasiyadda - waxay noqon kartaa mid aad u adag in la baro.
Doorarka u baahan khibrad dheeraad ah, waxaad weli u baahan tahay inaad hubiso inaad raadinayso xirfadaha jilicsan ee sare, laakiin sidoo kale waa inaad dejiso hawlo u baahan musharraxiinta si ay u muujiyaan xirfadaha loo baahan yahay iyo aqoonta maadada ee mas'uuliyadaha ay qaadi doonaan.
Waa muhiim in la hubiyo in waraystayaashu ay u qalmaan inay qiimayntaas sameeyaan – keen khubaro ka baxsan ururkaaga haddii loo baahdo.
In la isku dayo in la qiyaaso inta ay le'eg tahay khibradda musharraxa marka ay dhaafto ta waraystaha ayaa ah mid aan suurtagal ahayn, iyo hal shaqaale oo xun ayaa abuuri kara xaalado aad u dheggan oo aad u adag in la xalliyo.
Si khiyaano leh ayay u adkaan kartaa in la helo musharixiin isku dheelli-tiraya waayo-aragnimada iyo aqoonta jirta iyo soo dhawaynta waxbarashada dheeraadka ah iyo is-hoosaysiinta looga baahan yahay in si dhab ah loo wada shaqeeyo - sida uu yiri Dan Patmore, Maamulaha Kooxda Sare ee SEO ee Kooxda Sainsbury,
" SEO-yada qaarkood waxay rabaan inay sax noqdaan. Waxaan rabaa dadka raba inay wax bartaan."
Iskusoo wada duuboo, ku hay muhiimada wax iibsiga gudaha ee maskaxdaada marka aad qof cusub soo galinayso kooxdaada.
Kani ma yahay qof wax ku kordhin kara kalsoonida iyo awooda kooxdaada ee ganacsiga dhexdiisa, ku beera kalsoonida kooxdaada hogaaminta, oo kobcin karta wada shaqayn isdhaafsan?
Mise waxaa jirta khatar ah inay waxyeeleeyaan sumcadda iyo xiriirka kooxdaada?
Hogaaminta Kooxda Koraysa
Waxa jira boqolaal buug oo u heellan sida loo maareeyo kooxaha.
Laakin aniga ahaan, ujeedada ugu dambeysa ee horumarinta kooxdu waa in ay noqoto mid ka badan wadarta qaybaheeda.
Qaabka ay u wada shaqeeyaan shaqsiyaadka kooxda waa in ay sare u qaadaan qof kasta oo ka sarreeya xirfadaha iyo kartida uu mid kastaa iskiis u keeno.
Qiimaha La Wadaago
Habka loo baahan yahay si loo gaaro tan waxay la socotaa habka loo shaqaaleysiiyo, kor lagu sheegay: kala hormarinta qiyamka ka sarreeya wax kasta, u dhowaanta SEO oo ah waayo-aragnimo waxbarasho oo joogto ah, iyo xoojinta muhiimada daacadnimada iyo iskaashiga.
Si loo abuuro jawigan, waxaad u baahan tahay inaad ku tababarto hagitaan ku saabsan maamul-wanaagga, adoo diiradda saaraya horumarinta iyo ku hagida asxaabtaada xirfadahooda, iyo inaad socodsiiso koox dhammaystiran oo wax ku ool ah oo shakhsiyaadka ay dareemaan in lagu qiimeeyo.
Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay kooxaha SEO, maadaama qaar badan oo ka mid ah tayada ka dhigaysa qof si fiican ugu habboon anshaxan sidoo kale waxay ka dhigi kartaa inay u adkaystaan ​​​​hoggaamin badan.
Bartayaasha cimriga dheer waxay jecel yihiin inay su'aalaan malo-awaalka oo ay gaadhaan gunaanadkooda iyo mushkilad-xaliyayaasha waxay jecel yihiin inay hagaajiyaan hababka halkii lagu qasbi lahaa inay sameeyaan sida had iyo jeer loo sameeyo.
Iyo kuwa xiiseeya rabitaanku waxay jecel yihiin in loo oggolaado inay baaraan taangiyada oo ay daaha ka qaadaan fikrado cusub.
Ku adkeysiga dareenkan si aad u heshid maamul badan oo kooxdaada ah kaliya kama dhigi doonto kuwo murugo leh, laakiin waxaad sidoo kale waayi doontaa fikradahooda iyo aragtidooda (oo aad lumiso fursadaha).
Haddaba sidee baad u hubin kartaa in qof walba uu u jiidayo jihada saxda ah?
Sida wax kasta oo kale, tani waxay hoos ugu dhacdaa iibsashada, marka laga reebo wakhtigan, waxaad u baahan tahay inaad ka hesho iibsashada kooxda SEO lafteeda. Ficil ahaan, tani waxay la macno tahay inaad:
Noqo mid hufan la wadaaga istaraatijiyadaada kooxdaada, si la mid ah waxaad ula wadaagi lahayd daneeyayaal sare oo badan.
Marka ay shakhsiyaadka kooxdu ku koraan waayo-aragnimada oo ay keenaan aragtidooda qiimaha leh iyo meelaha khibradda ah, ka qayb geliyaan abuurista ee xeeladda.
Hubi in qof kastaa garanayo halka diiradda la saarayo, maxay yihiin ujeeddooyinka iyo sababta. Ku heshiiya filashooyinka iyo natiijooyinka, oo ay ku jiraan waqtiyada kama dambaysta ah. Qaab dhismeedkani waxa uu lama huraan u yahay in wax lagu sii wado iyadoo la ogolaanayo hal-abuurka.
Ilaali dib u dhaca mashaariicda si baaxad leh oo loo kala hormariyo hadhow. Tani waxay u ogolaaneysaa kooxdaada inay kuu keenaan fikrado cusub oo lagu maqlo, iyada oo aan meesha laga saarin mudnaanta hadda jirta.
Ugu dambayntii, xiddigayga woqooyi ee dhisida iyo hogaaminta koox had iyo jeer waxay hoos ugu dhacdaa kalsoonida. Waxaan rabaa in aan shaqaaleysiiyo dad aan aamini karo oo aan doonayo in aan kasbado tooda.
Waxaan rabaa inaan ku dhiirigaliyo kooxdayda inay isku kalsoonaadaan, waxaana rabaa in qof walba uu dareemo in la aamini karo.
Haddii aad tan ka soo jiidi karto, waxaad ku dhammaanaysaa koox si wada jir ah uga shaqeysa ujeedooyinka la wadaago, isku dayaan naftooda si ay u noqdaan kuwa ugu fiican, horumariya awoodahooda iyo takhasuskooda, wax ka bartaan midba midka kale, oo abuura fikrado iyo hal-abuuro kobcin doona barnaamijkaaga SEO. mustaqbalka.
8 Xirfadaha SEO ee Ganacsiga oo ku kordhiya Qiimaha Kooxdaada & Shaqadaada
4 Caqabadaha Guud ee Guriga dhexdiisa SEO & Sida Looga Gudbiyo Iyaga
Hagaha SEO ee Ganacsiga: Xeeladaha, Qalabka, & Wax ka badan
Sawirka sifaysan: Prostock-studio/Shutterstock
Sida Xayeysiiska Fiidiyowga Dijital ah u maamuli doono tobanka sano ee soo socda
Istaraatiijiyada Dhageystayaasha PPC: Beegsiga vs. U fiirsashada (Tusaaleyaal)